कथाः बाल्यकालको त्यो संस्कार ! | Citizen Post News
कथाः बाल्यकालको त्यो संस्कार !
२०७६ पुस २३ गते ११:२१
रामप्रसाद जीको पहिलो छोरो हुदाँ पत्नीले भनिन,'बच्चालाई गुरुकुलमा शिक्षा दिलाउँ, मैले सोचेकी छु कि गुरुकुलमा शिक्षा दिएर यसलाई धर्म ज्ञाता पन्डित योगी बनाउँछु ।'
राम प्रसादजीले पत्नीलाइ भने,'पाण्डित्य पूर्ण योगी बनाएर यसलाई भोकै मार्नु छ र ? मैले यसलाई ठुलो अफिसर बनाउँछु ताकि दुनियाँमा एक सफल मानिस बनोस् ।'
राम प्रसादजी सरकारी बैंकमा खजान्ची पदमा थिए । पत्नी धार्मिक थिइन् र इच्छा थियो कि छोरो पाण्डित्य पूर्ण योगी बनोस्, तर राम प्रसादजी मानेनन् ।
दोश्रो पनि छोरो भयो पत्नीले जिद्दी गरिन्, राम प्रसादजीले यस पटक पनि मानेनन्, तेश्रो पनि छोरो भयो यसपटक पत्नीको जिद्दीको अगाडी राम प्रसादजी हारे, र अन्ततः उनले गुरुकुलमा शिक्षा दीक्षा दिलाउनको लागि त्यहीं पठाए ।
जब समयको चक्र बिस्तारै-बिस्तारै घुम्दै गयो । अब त्यो दिन आयो जब बच्चाहरु आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भए । पहिला दुई छोराले मेहनत गरेर सरकारी जागिर प्राप्त गरे । जेठो डॉक्टर, माइलो बैंक मैनेजरको काम गर्न थाल्यो ।
एक दिनको कुरा हो ।
राम प्रसादजीले पत्नीलाई भने,'अरे सुन त ! देख्यौं, मेरा दुई वटा लायक छोरा सरकारी पदमा भए हैन्, राम्रो कमाइ रहेछन् । यी दुबैको जिन्दगी त अब सेट भयो । कुनै चिन्ता छैन् दुवैको तर अफसोस, मेरो कान्छो छोरो गुरुकुलको आचार्य बनेर घरघर यज्ञ गराउँदैछ, प्रवचन गर्दैछ । जति उसले महिनामा कमाउँछ, त्यति मेरो एउटा छोराले एक महिनानामा कमाउँछ । अरे पग्ली ! तिमीले आफ्नो मर्जी गरेर ठुलो गल्ती गयौं । तिमीलाई पनि आज यही कुरामा पश्चाताप हुन्छ होला । मलाइ थाहा छ, तर तिमी बोल्दिनौं ।'
पत्नी ले भनिन,'हामीमध्ये कुनै एक गलत छ । र यो आज दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्छ । ठिकै छ अब हामीले परीक्षा लिऔं । तीन वटै छोराहरुको । को गलत छ र को सहि छ थाहा भइहाल्छ ।' अर्को दिन साँझको बेला पत्नीले कपाल फिजारेर आफ्नो साड़ीको पल्लू फाडेर र अनुहारमा एक दुईटा घाउको निशान बनाएर आँगनमा बसिन् । र पतिदेवलाई भित्र कोठामा लुकाइन् ।
ठूलो छोरो आएर सोध्यो-मम्मी के भयो ?
आमाले जवाफ दिईन-तेरो बाबाले पिटे ।
ठुलो छोरोः बुढा पागल भएकी क्या हो ? कहाँ छन ? बोलाउनुस् त !
आमाले भनिन- हुनुहुन्न, बाहिर जानु भएको छ ।
ठुलो छोरोः आएपछि मलाई बोलाउनु होला, म कोठामा छु, मेरो खाना पस्किनुस् ! मलाई भोक लागेको छ ।
यति भनेर उ आफ्नो कोठामा गयो ।
माइलो छोरो आएर सोध्दा आमाले त्यहि जवाफ दिईन् ।
माइलो छोरोः बुढा पागल भएकी क्या हो ? यो बुढेसकालमा ! उनलाई भन्नुस् चुपचाप आफ्नो बचेखुचेको जिन्दगी गुजारुन् । आए भने मलाई बोलाउनु र मैले खाना खाएर आएँ, सुत्नु छ । यदि आए भने मलाई अहिले नउठाउनु, बिहान म क्लास लिन्छु ।
यति भनेर उ पनि कोठा भित्र पस्यो ।
राम प्रसादजीले कोठाभित्र बसेर सारा कुरा सुनिरहेका थिए । यस्तो लाग्दैथ्यो कि जस्तै उनको पैताला मुनिको जमिन भासिएको छ । र, उनको आँसु रोकिएको थिएन । कसरी यी बच्चाहरुको लागि दिनरात मेहनत गरेर पाले पोसे ।
उनीहरुलाई ठुलो मान्छे बनाए । जसको तमाम गल्तीलाई मैंले आँखा चिम्लिएर अगाडी बढाएँ । र यो यस्तो बर्ताव, अब त सहन नै सकिदैन् ।
यत्तिकैमा कान्छो छोरो घरमा हरि ओम भन्दैभित्र आयो ।
आमालाई यो हालमा देखेर दौड्दै आएर सोध्दा आमाले अब नराम्रो शब्दमा आफ्नो पतिलाई गाली गरिन् । उसले आमाको हात समाएर सम्झायो, 'आमा हजुर पिताजीको प्राण हो । उहाँ हजुर बिना अधूरो हुनुहुन्छ । यदि पिता जीले हजुरलाई केहि भने पनि त के भयो । मैले पिताजीलाई आजसम्म हजुरसँग रिसाएर कुरा गरेको देखेको छैन् । उहाँले हजुरसँग हमेशा प्रेमले कुरा गर्नुहुन्छ । जसले यति सारा खुसीहरु दिनु भयो, आज रिसाएर पेश आउनु भयो त के भयो, हुन सक्छ आज उहाँलाई कुनै कुरा लिएर चिन्ता भयो होला । अथवा हजुरबाट कुनै गल्ती जरूर भयो होला । आमा ! पिताजीले हजुरको कति ख्याल राख्नु हुन्छ । याद छ हैन हजुरलाई, तीन बर्ष पहिला जब हजुरको स्वास्थ्य ठिक थिएन, त्यतिबेला पिताजीले कति दिनसम्म हजुरको सेवा गर्नु भएको थियो । उहाँले नै खाना बनाउनु हुन्थ्यो, घरको सारा काम गर्नु हुन्थ्यो, लुगा धुनु हुन्थ्यो, त्यतिबेला हजुरले फोन गरेर मलाई भन्नु भएको थियो कि म संसारको सबैभन्दा भाग्यशाली स्त्री हुँ, तिम्रो पिताजीले मेरो धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ ।'
यति सुन्ना साथ छोरालाई अँगालो हालेर जोडजोडले रुन लागिन्, राम प्रसादजी आँखामा आँसु लिएर अगाडी खडा थिए ।
'अब बताउनुस् हजुरले के भन्नुहुन्छ मेरो फैशलाप्रति, पत्नीले रामप्रसादजी संग सोधिन् ।
राम प्रसादजीले तुरन्त आफ्नो छोरालाई अंगालो हाले ।
पत्नीले भनिन,'यो शिक्षा अग्रेजी माध्यामबाट पढाई हुने विद्यालयमा दिईदैन् । आमा बाबुसँग कसरी पेश आउनुपर्छ, कसरी उनको सेवा गर्नुपर्छ । यो त गुरुकुलमा नै सिकाइन्छ । जहाँ वेद, गीता, रामायणजस्ता ग्रन्थ पढाइन्छ । राम्रो संस्कार दिइन्छ ।'
राम प्रसादजीलाई महसुस भयो कि जुन बच्चाप्रति लाखौं खर्च गरेर डिग्री दिलाए, त्यो सब जाली निस्कियो । बास्तवमा ज्ञानी त ति सब बच्चा हुन्, जसले जमिनमा बसेर पढेका हुन्छन्, म कति ठूलो मुर्ख रहेछु । फेरी मनमा एक आवाज निस्कन्छ । काश मैले तीन वटै छोराहरुलाई गुरुकुलमा शिक्षा दिक्षा दिएको भए । #गणेशजी